🥇 ▷ Ka dib guushii ay ka gaadhay Steam, DARQ waxay gorgortan la galayso dukaanka ciyaaraha 'Epic Games Store' laakiin iyada oo aan cid gaar ahi jirin ✅
Ka dib guushii ay ka gaadhay Steam, DARQ waxay gorgortan la galayso dukaanka ciyaaraha ‘Epic Games Store’ laakiin iyada oo aan cid gaar ahi jirin
Dhowr toddobaad kahor, Ciyaaraha Furan wuxuu bilaabay ciyaartiisa cusub DARQ gudaha Steam. Ciyaartan ayaa ah isku soocelin 2D ah oo is dhiib ah oo leh qaab gaar ah, kaas oo soo jiitay dareen badan isla markaana u oggolaaday inay lahaato iibyo wanaagsan. Ciyaartan ayaa sidoo kale soo jiidatay dareenka Tim Sweeney, oo ah madaxweynaha Ciyaaraha Epic, kaasoo hadda isku dayay inuu ka helo waxyaabo ku saabsan horumarintiisa. In kasta oo waxa dad badani filayaan, shirkadda waxay ku jawaabtay wax aan caadi ahayn.
“Waan ku faraxsanahay inaan aragno in DARQ uu guuleysto maxaa yeelay waa ciyaar weyn waana u qalmaa. Waana sababtaas tan aan ula xiriirnay (Ciyaaraha Aan La Soo Bixin) si aan u baarno waxa ka soo baxa, “ayuu Sweeney ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. Mid ka mid jawaabaha ayaa ka yimid horumariye lafteeda, kaas oo leh: “Tim, waan ku faraxsanahay in aan tan maqlo. Haddii aad beddesho maskaxdaada oo aad aqbasho DARQ dukaankaaga daaweyn la’aan, waxaan ku deeqi doonaa 100% dukaanka Epic Games Store wuxuu ku deeqay sadaqo. Haddii aad aqbasho, sadaqadda ayaa laga yaabaa inay goor dambe doorto bulshada. ”
Tim, waan ku faraxsanahay inaan taas maqlo. Haddii aad beddesho fikirkaaga oo aad aqbasho DARQ dukaankaaga khaas ahaan, waxaan ku deeqi doonaa 100% dakhligeyga ‘EGS’ oo ah sadaqo. Haddii aad aqbasho, sadaqadda ayaa soo xuli doonta bulshada ciyaarta wakhti dambe. https://t.co/lSQ5lfdaeI
– Ciyaaraha Unfold (@UnfoldGames) Ogosto 26, 2019
Sweeney wali jawaab kama uusan bixin, ugu yaraan Twitterka. Sida muuqata, Tim Sweeney wuxuu sidoo kale soo jeediyay wax la mid ah Steam: “Haddii Steam uu oggolaado inuu weligiis la wadaago 88% dakhliga dhammaan horumariyeyaasha iyo daabacayaasha iyagoon heysan ballanqaad kale, markaa Epic wuxuu si dhakhso ah u joojin doonaa helitaanka waxyaabaha gaar u ah wuxuuna xitaa ka fiirsan doonaa inuu ku daabaco cayaaraha Steam . ”
Maxay kula tahay DARQ?
Xigasho: Ciyaaraha 3D